Uchwepheshe we-Semalt: Okuqukethwe Okumangalisayo Ngaphandle kokufakwa kwegama elingukhiye
Uma kuziwa ezihlokweni kanye nokuqukethwe kwewebhu, abantu abahlukahlukene bakholelwa ukuthi i-SEO iphathelene nokugxila kwegama elingukhiye. Qinisekisa ukuthi okuqukethwe okubhaliwe kukhululekile kumazwi angukhiye avumelayo namagama angenangqondo. Ngaphezu kwalokho, izihloko ezithandekayo ziyokuholela endaweni engekho, futhi akufanele uhambe nalokho kuphela ngenxa ye injini yokusesha .
UMichael Brown, i- Semalt iMenenja yokuphumelela kwamakhasimende, ukhumbuza ukuthi kufanele uhlale ukhumbule ukuthi ukugxila kwegama elingukhiye ngeke kukuholele noma kuphi. Esikhundleni salokho, okuqukethwe okubandakanyekayo nokuwusizo yiyona ndlela kuphela amawebhusayithi angahlala isikhathi eside - web reporting tools open source php editor. Uma udidekile mayelana nendlela yokwenza ngcono okuqukethwe okutholakala kwi-intanethi nakumphakathi wezenhlalo, lokhu kuyindawo efanele.
Kumelwe ukuba wezwa ngezikhungo zikahulumeni, abakhi bezokwaziswa, nabathengisi abathanda ukukhuluma nge-SEO. Okuqukethwe okutholakala uhlobo lokuqukethwe okubandakanya izivakashi eziningi ngaphandle kwesikhathi. Uma kuziwa kokuqukethwe okutholakala, akudingeki ukuba uhlukanise izinjini zokusesha kusuka kuwebhusayithi yakho kanye nemidiya yomphakathi. Esikhundleni salokho, kufanele ugxile ekudaleni amawebusayithi atholakalayo nezihloko ezisebenza kuzo zonke izinhlobo zabasebenzisi futhi zingakuthola imali eningi kwi-intanethi.
Kumele ugxile ezintweni ezintathu zezethameli: izethameli zakho zezitifiketi, ezingasetshenziswa ngokusebenzisa imidiya yezenhlalo, futhi ozothola okuqukethwe kwakho ngemibuzo yosesho ikakhulukazi nge-Google..
Uma kuziwa ekukhulumeni nabomakhelwane, ungakha okuqukethwe okukhuphuka okulindelekile. Kodwa uma ufuna ukwandisa inethiwekhi yakho, kufanele uqiniseke ukuthi okuqukethwe kwakho kuhilela izivakashi zangempela, kunokuba i-bots. Uma ubhala okuqukethwe okutholakala ngaphandle kokugxilisa igama elingukhiye, uzobona ukuthi abantu abaningi bayothanda ukuvakashela isayithi lakho kokubili ngokusebenzisa izinjini zokusesha kanye namawebhusayithi wezokuxhumana.
Eqinisweni, uhambo lwabavakashi luyinkimbinkimbi kunombukiso wethelevishini, ukuphrinta izikhangiso, imikhiqizo ongayibelana ngayo ku-Facebook, nemiphumela yokusesha injini. Kufanele uhlale ubhukumisa amakhasi abandakanyeka kakhulu futhi uqinisekise ukuthi izethameli zakho zenza okufanayo.
Kubonakala sengathi iningi lamaphuzu okuthinta amayelana nezinjini zokusesha ne-SEO. Ngakho-ke, ngisho nalapho ubeka eziningi zamagama angukhiye, ngeke kube nomqondo wabantu abahlukahlukene kwi-intanethi.
ama-URL womongo nokucacisa:
Indawo yezinsiza ezihlangene (i-URL) yisici sokuqala nesibaluleke kakhulu kokuqukethwe kwakho kuwebhu. Yilapho izethameli zakho zizofinyelela khona futhi zizofunda izinto ozibhalile. Qinisekisa ukuthi i-URL yakho icacile futhi iqukethe igama elingukhiye eliyinhloko. Asikho isidingo sokufaka eziningi zamagama angukhiye ngaphakathi kwalo. Ngokwengxenye ye-SEO, iningi labachwepheshe bathi kufanele wenze i-URL ibe mfushane futhi ephelele. Ngenxa yalokhu, ungasebenzisa amasevisi wokunciphisa i-URL.
Izihloko zakho kufanele zibe ngabafundi, hhayi wena. Ama-SEO ahlukene awavumelani nemitlolo ye-H1, ethi ayinayo impumelelo emihle kwi-rankings yakwa-Google. Ngakolunye uhlangothi, amanye ama-SEO athi izihloko zibalulekile futhi zishiya umphumela ohlala njalo ku-SEO yesayithi lakho.